सस्तो छैन डलरको खेल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०४:३२ English
सस्तो छैन डलरको खेल
हेमन्त काफ्ले, अष्ट्रेलिया:
‘हप्तामै लाख कमाइ हुन्छ रे यार अस्ट्रेलियामा, घन्टाको २० डलर अर्थात् लगभग दुई हजार रुपैयाँ अनि दिनको १० घन्टा काम पाए २० हजार ।’ हाम्रो मुलुक नेपालका अधिकांश युवा पुस्ताको बहस र चासोको विषय हो यो । यही चासोसँगै एउटा पुस्ताको पैसा कमाउने सपनाको लक्ष्य बनेको छ अष्ट्रेलिया साँच्चिकै अस्ट्रेलियामा पैसा कमाउन सहज छ त ? अस्ट्रेलिया बसेर फर्केकाहरूलाई सोध्नु र उनीहरूको अवस्था नियाल्नु जरुरी छ, त्यस्तै भुक्तभोगीका तितामिठा अनुभव सुन्नु अत्यावश्यक छ । अस्ट्रेलियामा उच्च अध्ययनका लागि आएका कुनै पनि नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियन डलरका बारे पूर्ण विज्ञ भएको हुनुपर्छ । पछिल्लो अंकमा हामीले थ्री डी अर्थात् ड्रग्स, ड्रिङ्कस र ड्रिम्सका बारे कलम चलाएका थियौं । यो अंकमा फेरि थ्री डी अर्थात् डलर कमाउनका लागि हुने डिफिकल्टी, डेन्जर्स र डर्टीबारे चर्चा गर्न लागेका छौं । अस्ट्रेलियाका लागि पैसा कमाउने उत्तम उपाय भने यिनै हुन् ।
पैसाको जोहो गर्न नस्क्नेहरू मलेसिया र खाडी मुलुकको बाटो तताउँदै गर्दा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेर आठ–दस लाख खर्च गर्न सक्नेरूको कमाउने अनि पढ्ने आकर्षक गन्तव्य बनेको छ अस्ट्रेलिया । खाडीको कमाइ र कामका बारेमा सबैलाई छर्लङ्ग भइसकेको छ । खाडी र मलेसियाको काम , दाम र जोखिमबारे नेपाली छापाले धेरैपटक पूर्ण पाठ छापिसकेका छन् । ऋण काढेर मलेसिया र अरब पुगेकाहरूको बिचल्ली भएका घटनाभन्दा केही फरक भए पनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा पनि पैसा कमाउन त्यति सहज भने छैन । नेपालजस्ता मुलुकबाट अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुक प्रवेश गरेका व्यक्तिले गर्ने काम र उनीहरूले पाउने दाममका बारेमा भने त्यति चर्चा हुन सकेको पाइँदैन । लाखौं रुपैयाँं खर्चेर करोडौं कमाउने सपना देख्नुअघि डलरको काम र दामबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ ।
दिउँसोका पढाइ र रातभरको कामका कारण थकित शरीर र राता आँंखा पार्नेहरुको भीडबाट अलग केही एनआरएनको कमाइबारे भने हामीले चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेका छैनौं । प्रतिशतका हिसाबले ०.५ पर्ने केही व्यापारी, कन्सलट्यान्ट, चिकित्सक र सरकारी जागिर पाएका इन्जिनियर र डाक्टरबाहेक अधिकांश नेपालीको कमाइ गर्ने माध्यम भने हो थ्री डी नै हो ।
टाइसुट लगाउने भन्दा कट्टु लगाउनेले बढी पैसा कमाउने यहाँंको पुरानै चलन हो । पढाइसँगै अस्ट्रेलिया सरकारको परिवर्तित र कठिन मापदण्डको सामना गर्नुपर्दा विशेष गरीः विद्यार्थीहरू यतिखेर निकै समस्यामा छन् । आफ्नो कमाइ कलेज वा विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्दा र खाना र बसाइको महँंगीले पिरोलेको छ उनीहरूलाई । कानुनी दायराभित्रको २० घन्टे कामले विद्यार्थीलाई बाँच्नै कठिन छ अस्ट्रेलियामा । सोही कारण पनि डिपेन्डेन्ड अर्थात् पूर्ण कमाइ गर्न पाउने एउटा सरल बाटो बनाइदिएको छ सरकारले । तर विवाहतिका लागि यो उपाय उपयुक्त विकल्प भए पनि एकलका लागि भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तै छ । तर कसैकसैले यसलाई कमाइ गर्ने नक्ककली धन्धा बनाएका घटना पनि अस्ट्रेलियामा नभएका होइनन् ।
जे होस् डलरको दाममा साटिँदा भने अधिकांश नेपाली कतै न कतै थ्री डीबाट गुजे्रेको तत्य यहाँको नेपाली समाजमा सहजै भोग्न पाइन्छ । ‘हिजोका दिनमा हामीले पनि यस्तै गरेका हौं बाबु’ अहिले हिल्स र वाटर फन्टमा घरजम गरेर बसेकाहरुको मुखैमा झुन्डिएको भनाइ हो यो ।
अस्ट्रेलिया छिरेका अधिकांश नेपाली आखिर के काम गर्छन् त ? एज केयर (बूढाबूढी स्याहार्ने काम) धेरै नेपालीको कमाइको राम्रो बाटो बनेको छ । त्यस्तै केयर टेकरको जागिर पनि धेरैलाई फलिफाप भएको छ । नेपाली मात्र होइन भारतीय, बंगाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकनलगायत अधिकांश एसियाली आप्रवासीहरूको कथा उस्तै छ । बिश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ गर्नेदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स कुरेर बस्नेसम्म क्लिनिङ र किचेनतिर भेटिनु सामान्य नै हो ।
क्लिनिङ अर्थात् सरसफाइ, धेरै दक्षिण एसियालीको रोजाइ र कमाइको राम्रो क्षेत्र बनेको छ अस्ट्रेलियामा । कलेज र स्कुल र अफिस सरसफाइ गर्नुmलाई राम्रो र सुरक्षित मानिन्छ तर पब, रेस्टुरेन्ट र किचेन क्लिनिङलाई कठिन रूपमा लिने गरिन्छ ।
घन्टाको १८ देखि २५ डलरसम्म पाइने यस्ता कामलाई नेपाली भाषामा फोहारी काम भन्ने गरिन्छ । अधिकांश नेपाली युवा विद्यार्थी, डाक्टर र इन्जिनियर यो काममा लागेका भेटिन्छन् । बिहान ४ बजेदेखि ९ बजेसम्म चल्ने यस्ता काम गर्ने नेपालीको घुइँचो लाग्ने गर्छ सिड्नी, मेलबर्न र ब्रिसबेनजस्ता सहरमा । यस्तो काम गरेर नेपालीले हप्ताको आठदेखि एक हजार डलरसम्म कमाउने गर्छन्, जुन हाम्रो समाज र मुलुकका लागि लोभलाग्दो आम्दानी हो । पब र रेस्टुरेन्ट क्लिनिङ भने रातभर चल्छ । करसँंगै क्यासमा पनि काम हुने भएकाले विद्यार्थीका लागि यस्तो काम राम्रो आय आर्जन गर्ने माध्यम बनेको छ । अधिकांश विद्यार्थी क्यासमा क्लिनिङ गर्नुलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिन्छन् । महँगो पढाइ र बसाइले पनि उनीहरुलाई यस्तो काम गर्न बाध्य पारेको हो ।
युनिभर्सिटी अफ वेस्र्टन सिड्नी, पेनरिथबाट इन्जिनियरिङ गरेका खनाल थरका एक नेपाली आफ्नो पढाइअनुसारको कामको खोजीमा भौंतारिँदा–भौंतारिँदा आजित भएर यतिखेर क्लिनिङमा काम गर्दैछन् । अस्ट्रेलियाबाट इन्जिनियरिङ गरे पनि भने डिग्रीअनुरूपको जागिर नपाएपछि क्लिनिङ रोज्नुपरेको उनले बताए । उनी मात्र होइन अन्य विषयमा उच्च अध्ययन गरेका थुप्रै नेपालीलाई पनि क्लिनिङ सहज र उपयुक्त जागिर बनेको छ । डर्टीसँगै डिफिकल्टी र डेन्जर्समा कन्सट्रक्सन (निर्माण) का काम पनि पर्छन् । ‘कमाइ राम्रो हुने भए पनि निकै परिश्रम जोखिमयुक्त काम हो कन्ट्रक्सन’, एक विद्यार्थीले नाम नबताउने सर्तमा भने ।
काठमाडौंमा राम्रै परिवारमा जन्मेर आरामदायी जीवन बिताउनेका लागि भने अस्ट्रेलियाको जीवन चुनौतीपूर्ण छ । निकै हौसिएर आएकी केसी थरकी काठमाडौंकी एक युवती सिड्नी आएपछि दोधारमा परेकी छन् । ‘यस्तो हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा भएको भए सायद…’ नेपाल न्युजसँगको कुराकानीमा उनले भनिन् । विद्यार्थी भिसा लागेपछि काठमाडौंमा ठूलै पार्टी आयोजना गरेर यता आएको क्षण सम्झँदै उनले भनिन्, ‘अहिले दोधारमा छु, डलर र डिनरलाई रातको निद्रासँग साट्नुपर्दा ।’
नेपाली वा दक्षिण एसियाली मात्र हैन, अन्य मुलुकवाट आएका चिकित्सक र इन्जिनियर पनि यहाँ मापदण्डको परीक्षाबाट गुज्रनुपर्ने हुन्छ । युरोपेली मुलुक मेसोडोनियाबाट चिकित्साशात्रमा एमडी गरेकी एक युवतीसमेत क्लिनिङमा भेटिइन् । त्यसमा फेल भए अन्य पेसा रोज्नुबाहेक विकल्प हुँदैन । मेसोडोनियाबाट एमबीबीएस गरेकी हेलेना न्यु साउथवेल्स युनिभर्सिटीमा क्लिनिङ गर्छिन् । बिहान चार बजेदेखि आठ बजेसम्म गर्ने सरसफाइको कामलाई उनी ‘पार्ट टाइम जब’ भन्न रुचाउँछिन् । योग्यताअनुसारको काम नपाउन्जेल यो उत्तम विकल्प रहेको उनको ठम्याइ छ । पढाइअनुसारको काम पाउनु यतिबेला फलामको चिउराझैँ भएको छ अस्ट्रेलियामा । सीए पढेकाहरु होटलका नाइट मेनेजर र आइटी पढेकाहरु जसोतसो टिकाउ धन्धामा लागेका पाइन्छन् । कुकरी र किचेन समाल्नेका लागि भने काम केही सहज देखिन्छ यहाँ ।
आप्रवासीहरूप्रति लचिलो देखिएको सत्ताधारी लेबर पार्टी निर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा केही कसिलो देखिएको छ । स्थायी बसोबास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट) का विकल्प पनि कसिलो बन्न थालेका छन् । पैसा ख्वाएर प्रायोजनमा पीआर लिन खोज्दा धेरै व्यक्ति ठगिएका छन् । जीवनभरको कमाइ पीआरमा लगानी गर्ने अनि पीआर नभएपछि निराश भएका नेपाली विद्यार्थी अलिअलि पैसा बोकेर स्वदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् ।
हामीले अधिकांश नेपालीको डलरखेती अर्थात् कमाइका बारेमा थ्री डी रोजेका होइनौं । गाह्रो र साह्रो काममै राम्रो आम्दानी हुने भएकाले पनि नेपालीहरू यसतर्फ आकर्षित भएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।
२५ श्रावण २०७०, शुक्रबार ०६:०२ मा प्रकाशित